नेपाल–रावलको नटुट्ने मन ! « Ok Janata Newsportal
नेपाल–रावलको नटुट्ने मन !
काठमाडौं । यतिबेला नेकपा विभाजनको संहारमा छ । नेकपा विभाजनका लागि विभिन्न शक्तिले भुमिका खेलिरहेको स्वयं नेताहरु ओकलीरहेका छन् । ७१ वर्षपछिको विरासतलाई थाम्न नसक्दा नेकपामा समस्या पैदा भएको छ ।
पछिल्लो स्थिति हेर्दा मुलुकको हालत दयनीय अवस्थाका पुगेको देखिन्छ । सरकार सञ्चालनमा अनुभव बटुलेका धेरै नेताहरु सडकमा छन् । अहिले सत्तामा रहेका मन्त्रीहरु स्वविकेकी भन्दा खेतालाको आश्वासनका आफ्ना निर्णय गरिरहेको आरोप खेपिरहेका छन् ।
यतिमात्र होइन मन्त्रीका पछाडि हिड्ने दलबल बिना अनुभवको छ । मन्त्री पनि नयाँ छन् उनीहरुलाई यतिसम्म पनि थाहा छैन कुन जिम्मेवारी कसलाई सुम्पिदा ठिक हुन्छ । मन्त्रीले सल्लाहकार राख्ने आफूलाई सहज होस् र नबुझेका विषयमा थप बल पुगोस् भनेर नै हो, तर अहिलेका केही मन्त्रीका वरिपरिको जत्था हेर्दा निकै पीडादायक छ ।
जबकी जसलाई जुन विषयमा थाहा छैन उसैलाई उहीँ जिम्मेवारी दिइएको छ । यहाँ हामी नेपाल–रावलको प्रसंग चर्चा गर्दै थियौँ बीचमा मनोवाद मोडिएछ ।
नेकपामा गतिलो छबि बनाएका र कुनै पनि विवादमा नअल्झिएका नेता हुन् माधवकुमार नेपाल र डा. भीम रावल । यी नेताको छबि धमिल्याउने अनेक प्रयास गरिएपनि सामान्यतया उनीहरुमा लोभ लालच र आश कमै मात्रामा देखिन्छ । नेपाललाई फरक रुपमा बुझेका डा. भीम रावलले उनको संगतले धेरै कुरा बुझे पनि, बुझाएपनि ।
आज धनगढी विमानस्थलमा स्वागत गर्दै गर्दा भीम रावलको मुहारमा छाएको कान्ती र नेपालले उनलाई थपेको आँटले सुदूरपश्चिममा नेकपाको पकड बलियो देखिन्छ । सत्य, निष्ठामा विश्वास गर्ने दुवै नेताले एकले अर्कोलाई निकै साथ दिएका छन् ।
डा. रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो पक्षमा ठूलो जनमत बटुलेका छन् । रावलको समर्थनमा सुदूरपश्चिमको करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या उभिएको देखिन्छ । पछिल्ला गतिविधिमा पनि नेकपा दाहाल–नेपाल पक्ष त्यहाँ बलियो छ ।